Komishanka Oo Ka Hadlay Xiliga lagu dhawaaqayo Natiijadda Doorashada Deegaanka | Somaliland.Org
Komishanka Oo Ka Hadlay Xiliga lagu dhawaaqayo Natiijadda Doorashada Deegaanka
November 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Doorashooyinka Goleyaasha deegaanka Somaliland ayaa maanta si nabad-gelyo ah uga dhacday dalka, waxaana u ordaya 2368 Murashax oo ku tartamaya 353 Kursi oo ah 23 degmo doorasho.
Murashaxiintaasi oo ka kala socda laba urur siyaasadeed iyo shan urur siyaasadeed oo kala ah KULMIYE, UCID, WADDANI, XAQSOOR, DALSAN,RAYS iyo UMMADDA.
Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka Somaliland Md. Ciise Yuusuf Xamari, ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka ay doorashadu uga bilaabantay dalka waxaanu yidhi “Doorashadu si wanaagsan ayay goob kasta uga socotaa dalka oo dhan, subaxnimadda hore ayay yara jirtaan inay dadku ku yara dawakhaan oo ay kala garan waayaan goobihii. Tusaale ahaan goob aanu doorashadii hore lagu qabtay oo masalan Meherad laga dhigay ayaanu meelo sakadi u dhaxayso goobtii u rarnay. Markaa waxa suurto gal ah inay dadka qaarkood ay yara daydayaan dadkii codka ka dhiibanayay ama kuwii ka shaqeynayayba. Markaa inta hore ayaa la isku yara meeraystaa abaarro 8:00 subaxnimaba si wanaagsan ayay hawshu way iska kala miirantay.”
Guddoomiyuhu waxa uu intaasi ku daray in doorashadu si wanaagsan uga qabsoontay dalka waxaanu yidhi “Gobol walba, goob walba iyo degmo walba si wanaagsan ayay codbixinta doorashadu uga socotaa. Markaa waxa jira meelo aanu ka joojinay codbixinta sababo amni waxaanu doonaynaa inaanu qofna waxba ku noqon waayo nafta Bini’aadmigu waa qaali. Badhan iyo Dhahar koox ayaa damacday inay wax khal-khaliso oo jidgooyooyin galay. Dabeedna waxaanu go’aan ku gaadhnay inaanu ka joojino doorashada iyadoo waliba labada degmaba ay dadweynuhu doonayeen doorashada iyo inay codeeyaan.”
Md. Ciise Xamari oo u waramayay Laanta Afsoomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in natiijadda doorashada goob walba lagu tiring doono isla goobta, waxaanu tilmaamay inay rajaynayaan inaanay hal todobaad ka badan shaacinta natiijada guud ee doorashaddu.
Doorashadda Goleyaasha Deegaanka Somaliland waxa doorashooyinkan kor joogtaynaya 52 xubnood oo ka socday 18 dawladood iyo 700 goob joogeyaal gudaha ah.
Previous PostMadaxweynaha Somalia Oo Majeertay Horumarka Doorashadda deegaanka SomalilandNext Post“Maleeshiyadda soo tuurtuurtay Xudun may Joojin Doorashadda Deegaanka..”	Blog